အခမ်းအနားများ | Center for Peace and Reconciliation | စာမျက်နှာ 2
National Political Dialogue Training
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ဦးကျော်လင်းဦး (CPR – တွဲဖက်ဒါရိုတ်တာ) မှ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် ဟိုပုံးမြို့နယ်မှ ပအိုဝ့်အကျိုးဆောင် ....
General Discussion on National Reconciliation
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးစင်တာ (Center for Peace and Reconciliation) အနေဖြင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့တွင် တော်ဝင်ဂါးဒင်း ဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် Guest Speaker အနေဖြင့် ဦးအောင်နိုင်ဦးမှ General Discussion on National Reconciliation ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ....
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် CPR နှင့် Clingendael organization တို့ပူးပေါင်းကျင်းပသော Insider Mediation Workshop အား Green Hill Hotel တွင် ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်မံကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်အချို့ ....
Civil-Military Relations & Leadership Seminar
Center for Peace and Reconciliation (CPR) မှ Civil-Military Relations & Leadership Seminar ကို နိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့ နံနက် (၉) နာရီမှ နေ့လည် (၁၂) နာရီခွဲအထိ Novotel Yangon Max မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် Leadership ....
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် Stakeholders Briefing ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲကို မနက် ၉ နာရီမှ နေ့လည် ၁၂ နာရီအထိ Novotel Hotel တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ EAOs မှကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများ တက် ....
(7-G) ၇ လွှာ၊ ဆင်မလိုက် တာဝါ၊ ကမ်းနားလမ်း၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ။
ရုံးဖုန်း : + ၉၅၉ ၄၅၆ ၃၆၂ ၈၃၀
© 2019-2021 Center for Peace and Recounciliation (CPR). All Rights Reserved. Web Design by NetScriper